UMongameli uTrump uqinisekisa ukuthi Izexwayiso Zohambo lwase-US zinepolitiki
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Ezintsha Zokuhamba » UMongameli uTrump uqinisekisa ukuthi Izexwayiso Zohambo lwase-US zinepolitiki
Ingabe abantu baseMelika kufanele bakholelwe Izixwayiso Zokuvakasha ZaseMelika noma Izeluleko? UMongameli Trump akacabangi kanjalo ngempela.
Iminyaka eminingi izeluleko zokuhamba zabantu baseMelika bezisolwa njengengxenye yeqiniso futhi evame ukushukunyiswa yipolitiki. UMongameli waseMelika uTrump ukuqinisekisile lokhu namuhla, ngokunokwenzeka ebeka izakhamizi zaseMelika engcupheni ngokwenza izeluleko zokuhamba zase-US zingabi semthethweni.
E-United States, ukukhipha isixwayiso sokuvakasha ngokumelene nezwe ngenxa yezizathu zezombangazwe kufana nokumemezela impi yeminotho ethile.
I-Consulate General yaseJapan eDetroit ixwayise izakhamizi zaseJapan okungenzeka zivakashele e-United States ngemuva kwezigameko eziningi zokudubula ezenzeke kuleliya lizwe ngempelasonto. Kwi isitatimende esikhishwe uMnyango Wezangaphandle yaseJapane ngempelasonto, uphiko lwezikhulu lwaxwayisa izakhamuzi zaseJapane ukuba “ziqaphele ukuthi kungenzeka kube nezigameko zokudubula kuyo yonke indawo e-United States,” echazwa “njengomphakathi wezibhamu.”
UMongameli utshele iThe Hill ngemuva kokubuza ngezixwayiso zohambo ezikhishwe ngamazwe ngokumelene ne-US ekuphenduleni izigameko zakamuva zokudubula: “Hhayi-ke, angikucabangi lokho (amazwe akhipha izixwayiso zokuhamba ngokumelene ne-USA). Kodwa uma bekwenza lokho, sizobe sesiphindisela.”
Lokho umongameli asanda kukuqinisekisa ukuthi izeluleko zokuhamba zase-US zokuthi abantu baseMelika baye kwamanye amazwe zingaba yiqiniso elingaphelele futhi zigqugquzelwe kwezepolitiki.
Ukukhipha izeluleko zokuhamba ngesizathu esisodwa sokuziphindiselela kungase kulingane nokusongela kobuphekula. Iqinisekisa ukucabangela okwenziwa esikhathini esidlule yizinhlangano ezifana ne-UNWTO noma i-ETOA yokuthi izexwayiso zohambo zase-US zivame ukugqugquzelwa ipolitiki.
Iseluleko sezokuvakasha se-Amnesty International e-United States of America sifuna abantu emhlabeni wonke ukuthi baqaphele futhi babe nohlelo lwezimo eziphuthumayo lapho behamba kulo lonke elase-USA. Lesi Seluleko Sokuhamba sikhishwa ngenxa yamazinga aphezulu odlame oluqhubekayo e-US Inqwaba yabantu iyadutshulwa e-Chicago njalo ngempelasonto iyodwa. Ngesonto eledlule kubikwe inqwaba yokudubula e-Ohio naseTexas.
Umnyango Wezangaphandle WaseJalimane uyaxwayisa: “I-United States of America yayiyisisulu sokuhlasela kwamaphekula eminyakeni yamuva. Qaphela emadolobheni amatasa nangesikhathi semicimbi ekhethekile.”
Izakhamizi zasemazweni amaningi emhlabeni jikelele okuhlanganisa iVenezuela ne-Uruguay zixwayisa izakhamizi zazo ngokuvakashela e-US
UMnyango Wezwe LaseMelika uhlukanisa amazwe ngamaleveli angu-4 ahlukene ukusuka kokuthi aphephile ukuya kokuthi "ungahambi." Ngabe lokhu kungachaza ukuthi i-US icabanga ukuthi ukuya eJalimane noma eBahamas kuyingozi kakhulu kunokuya eBrunei lapho izakhamizi zaseMelika zisongelwa ngokujeziswa ngokufa, ukujeziswa, ukushaywa noma ukuboshwa uma ziyi-LGBTQ?
Ngokusobala, Izexwayiso Zokuvakasha zingaba nemiphumela emibi embonini yezokuvakasha neyokuvakasha yezwe. I-United States njengenye yezimakethe zomthombo omkhulu wezokuvakasha eziphumayo ingumdondoshiya onamandla. Lapho uMnyango Wezwe uxwayisa, izakhamuzi eziningi ziyalalela. Ngenxa yalokho, wonke umnotho wezokuvakasha emazweni okuhlosiwe usengozini.
Njengoba uMongameli uTrump emane esabisa ngokukhipha izexwayiso ngokumelene nezwe elifana ne-Japan ngesizathu noma ukuziphindiselela kususa ukuba semthethweni kwezixwayiso zokuhamba zase-US. Kungase kubeke izakhamuzi zase-US engcupheni lapho zingakwazi ukunquma ukuthi iseluleko sohambo kufanele sithathwe ngokungathi sína noma sihloselwe ipolitiki nje.
Uma i-Japan ibizokwandisa izexwayiso, izindawo okuyiwa kuzo ezihlanganisa i-Guam ne-Hawaii zisengozini, njengoba ukuvakasha okuvela e-Japan kuyisici esikhulu senhlalakahle yabo.
Brunei Chicago Detroit I-ETOA Germany Guam Hawaii Japan Ohio I-united states Uruguay Venezuela
Ukuqhunyiswa kwamabhomu kwesibili ezinsukwini ezine kuzamazamisa iCopenhagen
I-Walmart: Sisazithengisa izibhamu ngemuva kokubulawa kwabantu abaningi eSitolo sethu se-El Paso
Maningi kakhulu ama-Israeli amasha e-Ukraine: Wow!
Izivakashi zamazwe ngamazwe zichithe u-$8.2 billion e-USA...